I-Internet Ministries - I-Solar Mission Philippines
Isizwe Esiyinhloko Futhi Isango Lomkhakha We-Asia
Njengoba kuneziqhingi ezingaphezu kwe-7,000 kanye nesibalo esakhulayo se-104 million, iPhilippines iyisizwe esikhulu nesango elibhekele e-Asia. Abantu abaningi basePhilippines basebenza eChina, ezinye izizwe zase-Asia, ngisho nakwamanye amazwe asempumalanga, lapho banezikhundla ezinamandla.
Indima Eyinhloko Nesikhathi Esikhathini SoMdlali WeSolar
ISonto LeNkosi selilokhu lihlala ePhilippines iminyaka eminingi ngenxa yemizamo yangaphambili yangaphambili neyamanje. Namuhla kunamabandla afaneleka e-800. AmaKristu asePhilippines alungele ukuqhubeka evangeli izwe lawo futhi athole isikhathi sokukhula kweSonto, kodwa adinga izinsiza zokunqoba ezinye izinselele.
Amasonto amaningi ePhilippines anabafundisi besonto-nhlobo noma akekho nhlobo. Umdlali we-solar anganikeza wonke amaqembu amasonto namakilasi ngokufundisa ngokujulile. Futhi, izindawo eziningi ePhilippines zikude futhi zinzima ukufinyelela. Isidlali selanga senzelwe isikhathi nendawo enjalo njengalokhu.
Ku-2014 Sunset yaqala umzamo omkhulu wama-multi-Continent usebenzisa abadlali be-audio-powered audio abadlali abasebenzisa isandla ukuze bafinyelele emhlabeni ngeVangeli. Umcimbi weSolar uyaqhubeka usakaze iZwi emhlabeni wonke. Umdlali weSolar uqukethe amahora angaphezu kuka-400 weBhayibheli nokuqeqesha iBhayibheli.
Uhlelo lweSolar Mission ePhilippines ukumboza leso sizwe ngeZwi likaNkulunkulu ngokusabalalisa abadlali be-2,000 isiNgisi ngezilimi zasePhilippines ngasekupheleni kwe-2018. Zizohlinzekwa kuwo wonke amabandla ezweni, emizamweni eyahlukene yemisebenzi, nakumholi wesonto nabashumayeli abazohlwanyela futhi baqinise amasonto futhi bavuthwe abazalwane.
Umzamo wonke wokuthola izimali ezidingekayo waqala ngoJanuwari 24th futhi uzohamba ngoDisemba 31, 2018. Izinkulungwane zamabandla nabantu ngabanye bazocelwa ukuba basekele lo mzamo.
Ngokuphana komuntu ongaziwa, izipho ku-Sunset International Bible Institute zizofaniswa nedola le dollar. Izipho ezithunyelwa eMbusweni weSolar zifanelekela kulo mdlalo.
Shayela i-Sunset ku-800-658-9553 ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-Solar Player ye-Philippines noma uvakashele iwebhusayithi yabo http://www.sibi.cc/solar.